“चरी जेलैमा” पछी बिष्णु माझीको लगत्तै मन रुवाउने अर्को गीत ‘पिंजडाको चरी’ एकाएक भाइरल बन्यो (भिडियो सहित) – Ap Nepal
“चरी जेलैमा” पछी बिष्णु माझीको लगत्तै मन रुवाउने अर्को गीत ‘पिंजडाको चरी’ एकाएक भाइरल बन्यो (भिडियो सहित)
September 30, 2021 521
काठमाडौं । पाल्पाली गायक तथा सर्जक पुरुषोत्तम गैरे नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । गायक गैरेले “पिंजडाको चरी” बोलको मन रुवाउने गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् । पुरुषोत्तम गैरे नामक आफ्नै यूट्यूब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतमा चर्चित गायिका सुनिता बुढाले साथ दिएकी छन् । यो गीतले माया प्रेम र बिछोडिनु पर्दाको पिडा उठाएको छ ।
कोभिड १९को कारण भएको लकडाउनमा गाउँमै बस्दा उनले उक्त गीतको सिर्जना गरेका हुन् । उक्त गीत टिकटकमा भाइरल भएको छ । यसरी टिकटकमा आफ्नो गीत भाइरल हुँदा निकै खुशी लागेको बताए । बिमल पौडेलको शब्द रहेको गीतमा संगीत स्वयम् गैरेले भरेका छन् । गीतको एरेन्ज कृष्ण बिके (भान्जा)ले गरेका छन् ।
गीतमा हेमन्त रसाइली सारंगी, बासुरीमा रत्न फुलुट, मादलमा खड्क बुडा मगर, ढोलकमा भुवन गन्धर्व र गितारमा संजीव लिम्बुको साथ रहेको छ । उक्त गीतको भिडियोमा क्रान्ति केसीले निर्देशन निर्देशन गरेका छन् । गीतको भिडियोमा गायक गैरेसँगै चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी, संगम भण्डारी लगायतको अभिनय रहेको छ ।
पाल्पाली गायक तथा सर्जक पुरुषोत्तम गैरे नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । गायक गैरेले “पिंजडाको चरी” बोलको मन रुवाउने गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् । पुरुषोत्तम गैरे नामक आफ्नै यूट्यूब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतमा चर्चित गायिका सुनिता बुढाले साथ दिएकी छन् । यो गीतले माया प्रेम र बिछोडिनु पर्दाको पिडा उठाएको छ ।
PrevEDV परेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेका ३ जना पक्राउ ! गरेका रहेछन् यस्तो गर्नै नहुनेकाम..
Nextइन्द्रेणीमा लैजाने भन्दै… बिनिताको घरमा हेर्नुहोस् कलाकार शुभकामना दिनेको ओहिरो ( हेर्नुस भिडियो )
श्रीमानले बुढेसकालमा अर्कैको श्रीमती लिएर फरार, श्रीमती रु*दै आइन मिडियामा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
दशै-तिहारको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो अफरै-अफर, के-के छन् त अफरहरूमा ? हेर्नुहोस्
डिभोर्स पछि पहि,लोपटक मिडि,यामा आएकी प्रतिभाले रुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्, (भिडियो हेर्नुस्) (5471)
निशा घिमिरेको नेपाली गीतमा मात्र हैन भोजपुरी गीतमा समेत दमदार अभिनय-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (2495)